Shuruudaha Oo Xaaladda - Tuesday Match - 50% dhigma ilaa £ 50 |
Shuruudaha Oo Xaaladda – Tuesday Match - 50% dhigma ilaa £ 50
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon u dhexeeya 2aad – 8th February 2017 GMT.
Macaashka oo keliya iyo Loss (P&L) on kulan booska xulay, Superman, Batman The, Justice League iyo siraad Green ka dhexeeya 00:00 & 23:59 (GMT) maalinta horumarinta tirin doonaa dhinaca isreebreebka Yididiilo ah.
Yididiilo ayaa waxaa la guddoonsiin doonaa sida ay faa'iido net (lacagta dhabta ah guuleystayna) on boosaska loo doortay. Haddii ay dhacdo in aad P net&L ayaa mashaqo ugu yaraan £ 10 ku guuleystayna, waxaad heli doontaa war xisaabiyaa at 50% ee P guud&L.
Si aad xaq ugu Yididiilo Win ah, ciyaaryahano waa ka dhigay deebaaji ugu yaraan £ 10 maalinta horumarinta iyo wagered on Superman, Batman The, Justice League iyo siraad Green The.
wadarta boost guushii ugu badan waa £ 50 oo lacag gunno.
shuruudaha wagering bonus Standard ee 30x lacagta bonus codsan hor gunno ama wax guuleystayna saftay noqon karaa.
lacag Bonus ka this kasbadeen
horumarinta, kaliya loo isticmaali karaa inuu u ciyaaro on kulan booska our.
General Shuruudaha iyo Xaaladaha Go'aanka apply.Management waa final kiisaska oo dhan.
Shuruudaha Oo Xaaladda – 50% Win Boost New game…
Shuruudaha Oo Xaaladda – 50% Win kor u xoojiso in £ 100
20% Win xoojiso Daily Cleo Plus theme ilaa £ 200
Shuruudaha iyo xaaladaha – Losses back week all…